﻿	Crispy Ikuku Fryer Shrimp (Jiri Oyi ma obu Oyi Oyi!) - Ezi Ntụziaka
ogologo oge ole ka ị ga-echekwa buttercream icing
ihe-eri na hash aja aja casserole
ị nwere ike ime kọfị dalgona na blender
ebee ka m ga-azụta achịcha panko
Crispy Ikuku Fryer Shrimp
Air fryer shrimp bu aru zuru oke ya na ahihia di nro na nkpuchi nke ihe nkpuchi nke ihe nkpuchi.
Ọ bụ azịza dị mfe maka nnabata oge ikpeazụ, nri n’akụkụ, ma ọ bụ ọbụlagodi n’elu a salad ! Gbalịa nwaa ahịhịa eghere eghe na tacos Ọzọkwa!
ugo bu akara chocolate ahuekere butter fudge
Anyị hụrụ usoro nhazi a n’anya n’ihi na ọ na-atọ ụtọ ma dị mma karịa oporo eghere eghe.
ham na 15 agwa ofe ite
Ntụziaka a abụghị naanị ụdị dị mma nke agụụ na-ewu ewu, mana ọ dị mfe ma onye ọ bụla hụrụ ya n'anya!
Jee ya ozi n'akụkụ otu ụzọ efere dị ka teriyaki , mmanụ a honeyụ mọstad ihendori , ma ọ bụ chipotle aioli !
SHRỊMP Họrọ nnukwu oporo nke peel na deveined. Nwere ike ịhọrọ oporo ma ọ bụ na-enweghị ọdụ.
Ọhụrụ ma ọ bụ nke oyi ga-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na ị na-eji oyi kpọnwụrụ naanị gbaa mbọ hụ na ha gbazere ma dọọ (ma kpoo ya ka mkpuchi ahụ wee rapara)!
AKA A na-eji lemon alo, ose, ntụ ọka, achịcha achicha, na achịcha Panko mepụta achịcha na-atọ ụtọ maka oporo a!
ARIBỌD. Maka nsụgharị spicier, jiri Cajun sizinin kama (ma obu obuna tinyere) ose oji. Ma ọ bụ, jiri taco sizinin n'ime oporo tacos !
taco itinye na anụ uzommeputa mfe
Otu esi eme ikuku fryer shrimp
Ọ dị ngwa dị ka ihe ọ bụla iji mee oporo na ikuku fryer!
Ihe mkpuchi Prep: Kwadebe achịcha achicha na ngwakọta ntụ ọka (kwa uzommeputa n'okpuru).
Achịcha oporo: Ghichaa oporo na ntụ ọka, akwa, mgbe ahụ Panko, na-ejide n'aka na ọ ga-ekpuchi nke ọma.
Esi nri na ikuku oyuyo: Shgba ogwu oporo na esi nri ma tinye nkata ikuku. Sichaa elu ruo mgbe oporo dị mma.
Tinye ọkacha mmasị gị dippers si aioli ka mmanya ihendori .
More Ikuku Fryer ọkacha mmasị
Ikuku nku okuku Ikuku - dị nro & kemmiri ihe
Ikuku Ikuku Ikuku - crispy & atọ ụtọ
Ikuku Fryer Bacon Wepụ Scallops - na mfe ime
Ikuku ikuku Fryer - site na ohuru ma ọ bụ oyi
Ikuku Fryer Turkey ara - nri zuru oke kwa ụbọchị
You mere ndị a Crispy Air Fryer Shrimp? Jide n'aka na ịhapụ okwu na ọkwa n'okpuru!
hamilton beach crock ite obere okpomoku
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ4 Onye edemedeHolly Nilsson Ndị a Air Fryer Shrimp zuru oke, achịcha, ma sie ike! Bipute Ntụtụ
▢ Ikuku Fryer
▢1 ½ teaspoons lemon ose sizinin
▢½ ngaji nnu ma ọ bụ nụrụ ụtọ
▢⅓ iko bred achicha achicha
▢⅓ iko Panko achịcha crumbs
▢abụọ buru ibu akwa kụrụ ihe
▢¾ paụnd nnukwu oporo na ọdụ peekpu na deveined
Gwakọta ntụ ọka na ọkara nke oge. Na efere dị iche, jikọta achịcha achịcha na oge fọdụrụnụ.
Kpochapu ikuku fryer na 400 Celsius F maka 5 nkeji.
Ghichaa oporo na ntụ ọka. Wepu oporo site na ngwakọta ntụ ọka wee banye n'ime akwa wee banye na ngwakọta achicha. Tinyegharịa na oporo fọdụrụ.
Mee ka ogwu oporo na mmiri.
Tinye otu akwa oporo na nkata ikuku. Esi nri nkeji 4.
Ghichaa oporo, spritz na-esi nri ma sie nri oge 4 ma ọ bụ naanị ruo mgbe esiri ya.
Tinyegharịa na oporo fọdụrụ.
Ije Ozi na mmanya ihendori.
Obere oporo nwere ike ịchọ nkeji ma ọ bụ obere oge iji sie nri. Nhapụ ga-adịgide ruo ụbọchị 3 n'ime akpa ikuku na ngwa nju oyi. Iji kpooghachi, tinye na mpempe mmiri na oven 350 Celsius maka ihe dị ka nkeji 10 ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga-adị.
Calorisị:Ogbe 210,Carbohydrates:17g,Protein:24g,Abụba:4g,Abụba Ajuju:1g,Cholesterol:Oji 307mg,Sodium:Ogbe 1158mg,Potassium:Ogbe 135mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:Ogbe 154IU,Vitamin C:4mg,Calcium:165mg,Iron:3mg
IsiokwuAir Fryer Shrimp, Ntụ ọka Shrimp Air Fryer, Ntụziaka Air Fryer Shrimp kacha mma, otu esi eme Air Fryer Shrimp N'ezieAir Fryer, Appetizer, Party Food, Azụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .